midowga musharraxiinta oo sheegay in ay dhisayaan Dowlad dalka lagu badbaadiyo. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii midowga musharraxiinta oo sheegay in ay dhisayaan Dowlad dalka lagu badbaadiyo.
Xubnaha midowga musharraxiinta mucaaradka oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa si adag uga hadlay xaaladda cusub ee uu dalku galay, gaar ahaan muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha iyo baarlamaanka Somalia.
Ugu horeyn qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in go’aanka kasoo baxay golaha shacabka ee muddo kordhinta loogu sameeyey hay’adaha dowladda uu yahay mid sharci darro ah, maadaama uu dhammaaday muddo xileedkooda oo afar sano ah, sida ku cad dastuurka.
Golaha midowga musharraxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dastuurka dalka iyo shuruucda u taalla dalka ay jabiyeen koox yar oo uu hoggaaminayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka.
Sidoo kale golaha ayaa ugu baaqay Ummadda Soomaaliyeed in meel looga soo wada jeesto wax ugu yeereen kali-talisnimo dalka lagu burburinayo dalka, sida ay hadalka u dhigeen.
Ugu dambeyn musharraxiinta ayaa qoraalkooda ku soo hadal qaaday tallaabadii uu qaaday taliyihii hore ee Booliska gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasam (Joon), iyaga oo sheegay inuu iska diiday qaadashada amarro gurracan oo lagu burburinayo dalka Soomaaliyeed.
Previous articleMas’uuliyiinta dalka Jabuuti oo sheegay in tirada dadkii ku dhintay doonta ku qalibantay xeebaha dalkaas ay gaartay 40
Next articleAskari madow ah oo ka tirsan militariga Mareykanka oo dacwad ka gudbiyay laba askari oo boolis ah
Wararka ka imaanaya Dalalka Yurub iy magaalooyinka dalalka Reer Galbeedka, ayaa sheegaya in la Wado qorsho Dowlada Waqtigeeda dhamaaday ay ku abaabaulayso banaanbaxyo...